Home - SindhuKhabar
सिन्धुपाल्चोकको ४० वडामा कसले कहाँ जिते
चौतारा । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि देशभर धमाधम मतगणना भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहहरुमा मतगणना भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोकका ३८ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । हालसम्म प्राप्त मतपरिणाम अनुसार कांग्रेसले २३ वडामा जित हासिल गरेको छ । एमालेले १० वडा, माओवादीले पाँच वडा र स्वतन्त्रले १ […]
तरुण दल अध्यक्ष दाेर्जेकाे वडामा काँग्रेसका राजु विजयी
भाेटेकाेसी । भाेटेकासी १ लिस्तीमा काँग्रेसका राजु लामा विजयी भएका छन् । उनी ८७९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनले एमालेका निमा लामालाई पराजित गरेका थिए । वडा नम्बर १ तरुण दल अध्यक्ष दाेर्जे लामाकाे वडा हाे ।
चाैतारा १ मा समाजवादीका युवलाल विजयी
चौतारा– सिधुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विजयी हासिल गरेको छ । समाजवादीका उम्मेदवार युवलाल श्रेष्ठ विजयी भएका हुन् । उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका उम्मेदवार कानुकान्छा श्रेष्ठलाई २३ मतले पछि पारे । ६६८ मत ल्याएर विजयी श्रेष्ठ बने भने एमालेका उम्मेदवारले ६६२ मत ल्याए ।
बलेफि । बलेफि गाउँपालिकाको आठ मध्ये ६ वडाको मतगणना सकिएको छ । वडा नम्बर १ मा वडा नम्बर १ मा हुप बहादुर खड्का ६७९ मतसहित विजयी भए । उनले माओवादी केन्द्रका दिलप्रसाद कर्माचार्य (५४१) लाई पराजित गरेका हुन् । यस्तै वडा नम्बर २ मा छविलाल न्यौपाने विजयी भएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका पुरुषोतम सापकोटालाई […]
पिस्करमा ३९ वर्षदेखि राज गरेको एमालेकाे गढ भत्कियाे , गाडियाे काँग्रेसकाे झण्डा
पिस्कर । २०४० सालमा सहिद इले थामी र विरबहादुर थामीले सहादत प्राप्त गरेको पिस्करको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ। एमाले को गढ तथा कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभुमी भनेर चिनिएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा न ४ मा नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष को उम्मेदवार टेकबहादुर गुभाजु (विजय ) ले ७३९ मत प्राप्त गरि विजयी भएका […]
हेलम्बुमा काँग्रेसकाे जित, अध्यक्षमा निमा र उपाध्यक्षमा अप्सरा विजयी
हेलम्बु । हेलम्बु गाउँपालपकामम काँग्रेसले जितेको छ । अध्यक्षमा निमाग्याल्जेन लामा र उपाध्यक्षमा काँग्रेसबाटै अप्सरा लामिछानेले जितेका छन् । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु मतपरिणाम आउने पहिलो गाउँपालिका हाे ।
बाह्रबिसे ३ मा काँग्रेसका जीवन विजयी
बाह्रबिसे । बाह्रबिसे नगरपालिका वडा न. ३ मा काँग्रेस विजयी भएको छ । वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको जीबन भण्डारीको प्यानल विजयी भएको हाे ।
राजकुमार पौडेल- अध्यक्ष, भोटेकोशी गाउँपालिका
बलेफि । बलेफि गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले अग्रता कायम गरेको छ । वडा नम्बर ६ सम्मको मतपरिणम अनुसार माओवादीका अध्यक्षका उममदेवार गंगा तामा ३८ सय ८ मत पाएका छन् । उनलाई कांग्रेसका सुवास तिमल्सिनाले पछ्याउँदै छन् । तिमल्सिनाले २९ सय ३८ मत पाएका छन् । यस्तै एमालेका नारायणकाजी श्रेष्ठले २०४८ मत पाएका छन् । उपाध्यक्षमा कांग्रेसका […]
मेलम्ची । मेलम्ची नगरपालिकामा एमालेले अग्रता लिएको छ । वडा नम्बर १ र १३ को मतगणना गर्दा एमालेका मेयरका उम्मेदवार बालकृष्ण देउजाले २८४ मतले अग्रता लिएका छन् । उनले १६ सय ६५ मत ल्याएका छन् । उनलाई कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार आइतमान तामाङले पछ्याइरहेका छन् । उनले १३ सय ६१ मत ल्याएका छन् । यस्तै एकीकृत […]
बाह्रबिसे । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका २ मा वडाध्यक्षमा रेशम तामाङ विजयी भएका छन् । उनले एमालेका जित बहादुर तामाङ लाई पराजित गरेका हुन् । वडामा रेशमको प्यानल नै विजयी भएको छ । यसअघि बाह्रबिसे वडा नम्बर १ मा पनि कांग्रेसले विजय हासिल गरिसकेको छ ।
इन्द्रावती । इन्द्रावतीमा मतदान सम्पन्न भएको छ । इन्द्रावतीकाे मतगणना भाेलि बिहानबाट सुरु हुनेछ ।
सुनकोसी । सुनकोसी गाउँपालिकामा १२ हजार मत खसेको छ । कुल मतदाता १७ हजार ३९९ रहको गाउँपालिकामा १२ हजार ७७७ मत खसेको हो । यो जम्मा मतको ७३.४१ प्रतिशत हो ।
मेलमची । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा मतदान रोकिएको छ । इच्छाएको व्यक्तिलाई मत दिने विषयमा दुई पार्टीका प्रतिनिधि बीच विवाद भइराख्दा पर्खाल नाघेर एमाले कार्यकर्ता मतदानस्थल प्रवेश गरेपछि मतदान रोकिएको हो । गोल्मास्थान स्वास्थ्य चौकी मतदान केन्दमा बसेका नेकपा माओवादी र नेपाली कांगेसका प्रतिनिधिबीच इच्छाएको व्यक्तिलाई मत दिने भन्ने विवाद भइराख्दा एमाले […]
मेलम्ची- सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–४ मा अशक्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आफन्तले नभई दलका प्रतिनिधिहरुले मतदान गर्न सघाएपछि केहीबेर तनाव भएको छ । मेलम्ची नगरपालिकाको ज्यामिरेमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको बुथमा ठेलमठेल भएपछि नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो । यसैगरी पाँचपोखरी थाङपाल–२ को याङ्ग्री मतदान केन्द्रमा एउटा मतपत्रमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छुटेको मतपत्र भेटिएपछि पनि केहीबेर तनाव […]
मेलम्ची । हेलम्बु गाउँपालिकाकाे पाल्चाेकमा काँग्रेस र एमाले कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका- ३का एमाले कार्यकर्ता खेन्जाे तामाङकाे घरमा काँग्रेस कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेपछि झडप भएको हाे । झडपमा खेन्जाे घाइते भएका छन् भने काँग्रेसका मानदाेर्जे तामाङ गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुको मेलम्ची अस्पतालमा उपचार भईरहेकाे […]
काठमाडौं । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको ह्वात्तै बढाएको छ । वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ । निगम […]
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक एमाले नेता सहकारीको रकम हिनामिना गरेकाछन् । सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउपालिका ७ इचोकमा रहेको नवजीवन साना किसान कृषि सहकारीको रकम नक्कली कर्जा खडा गरि हिनामिना गरेको हुन् । सस्थाका अध्यक्ष टंक गजुरेलले २०७६ साउन ६ मा सस्थाका उपाध्यक्ष बल बहादुर खड्का संचालन समिती रहेको सो सहकारीको १ करोड १८ लाख भन्दाबढी रकम अध्यक्ष […]
काठमाडौं l सरकारले विभिन्न १० प्रकारका सामग्रीको आयातामा पूर्णत रोक लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार मसान्तसम्म विभिन्न सामग्रीको आयातमा रोक लगाउने भएको हो। मन्त्रालयले कुटनीतिक नियोगले आफ्नै प्रयोजनका लागि आफैं पैठारी गर्न पाउने बताएको छ। यस्तै, बैशाख १३ भन्दा अगाडि बैकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको […]
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकका पूर्व महासचिव यादव दाहाल बागमती प्रदेश समितिमा मनाेनित भएका छन् । नेपाली उद्योग वाणिज्य संघले उनलाई बागमती प्रदेशकाे आमन्त्रित सदस्य मनाेनित गरेकाे हाे । दाहालले लामाे समय उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोककाे नेतृत्वमा रहेर काम गरे।
चाैतारा । नेपाली काङ्ग्रेस भोटेकोसी गाउँपालिकामा काँग्रेसका पासाङ नाेर्बु शेर्पा विजयी भएका छन् । उनले २६०५ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका अमृत खड्काले २०४८ मत ल्याए । उपाध्यक्ष काँग्रेस कै दिछेन शेर्पा विजयी भएकी छिन् । उनले २७१२ मत ल्याएकी छिन्।
बलेफि । बलेफि गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा कांग्रेसका यादव ठकुरी निर्वाचित भएका छन् । उनले ६५७ मत ल्याएका छन् । उनले एमालेका भक्त लाल श्रेष्ठ (५३७) लाई पराजित गरेका हुन् ।
सुनकोसी । सुनकोसी गाउँपालिकामा कांग्रेसले आफ्नो अग्रता कायमै राखेको छ । तीनवटा वडाको मत गणना भइसक्दा काँंग्रेसका अध्यक्षका उम्मदेवार विनोद जिसी श्रवणले २४४२ मत ल्याएका छन् । यस्तै एमालेका टपिन्द तिमल्सिनाले १८ सय ८६ मत ल्याएका छन् । यस्तै उपाध्यक्षमा कांग्रेसकी कान्छीमाया तामाङले २३२९ मत ल्याएकी छिन भने माओवादीकी उम्मदेवार दुर्गा थापाले १६२२ मत ल्याएकी […]
चौतारा । चौतारा साँगाचोगढी ८ मा कांग्रेसका उम्मेदवार अमृत दंगाल निर्वाचित भएका छन् । उनी ६८८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् । उनले माओवादीा उम्मेदवारलाई पराजित गरेका हुन् । उनी शिक्षण पेशा छाडेर राजनीतिमा लागेका थिए ।
टी-२० सिरिजमा नेपाल च्याम्पियन [तस्बिरहरू]
महामन्त्री थापा द्वारा इन्द्रावती रंगशाला र गाउँपालिकाकाे प्रशासनिक भवन उद्घाटन (फोटो फिचर)
तातोपानी र रसुवा नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सौहार्द रुपमा छलफल
काठमाडौं l अरबी पात्रो हिजरी संवत्अनुसार दशौँ महिना (सौवाल) को पहिलो दिन आज देशभरका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर ईदउल फित्र पर्व मनाउँदै छन् । दशौँ महिनाको पहिलो दिन आज विशेष नमाज पाठ गरेपछि तीन दिनसम्म आफूभन्दा ठूलाबडाकहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ । यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ । आशीर्वाद लिन […]
काठमाडौं l चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘रामनवमी’ पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ । असत्यमाथि सत्यको विजय तथा भगवान् श्रीरामको सम्झनामा मनाइने रामनवमी पर्वका उपलक्ष्यमा भगवान् रामचन्द्रका मन्दिरहरूमा पूजापाठ गरिन्छ । त्रेतायुगमा आजकै दिन भारतको अयोध्यामा राजा दशरथ र रानी कौशल्यावतीको सुपुत्रका रूपमा विष्णुको अवतार लिएर भगवान् श्रीरामको जन्म […]
1 भाेटेकाेसीमा काँग्रेसका शेर्पाद्वय विजयी
2 बलेफि-५ मा कांग्रेसका यादव ठकुरी निर्वाचित
3 सुनकोसीमा कांग्रेस ६ सय मतले अगाडि
4 शिक्षण छाडेर राजनीतिमा लागेका अमृत वडाध्यक्षमा निर्वाचित
5 बलेफिका ६ वडामध्ये चार वडामा कांग्रेस निर्वाचित
6 सुनकाेसी ३ मा ईश्वर विजयी
भक्तध्वज बोहोरा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । यसअघि २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी त्रिपुरासुन्दरीबाटै अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । उनी त्यतिबेला झिना मतान्तरले नेकपा एमालेका उम्मेदवार भुपेन्द्र श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए । बोहोरा दोस्रो पटक उम्मेदवार बनेका छन्। उनीसँग २०७४को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बनेको भुपेन्द अहिले नेपाली कांग्रेसमानै आबद्ध छन् । […]
मुख्यमन्त्री पाण्डे: बागमती प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्रधिकरणबीच सहकार्य गरेर उज्यालो प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मकवानपुरको हेटौँडामा आयोजित ‘नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उहाँले प्रदेश सरकारवाट जल र ऊर्जालगायत अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग प्रथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक […]
नेपाली कांग्रेसको यो १४औँ महाधिवेशनमा मलाई उत्साह र अपेक्षा भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई वैधानिकता दिन मंसिरभित्रै महाधिवेशन सकिनुपर्छ, यसैको कर्मकाण्ड भन्‍ने लागेको छ । अब पनि महाधिवेशन भएन भने पार्टीले वैधानिकता गुमाउँछ । चालु नेतृत्वले अत्यन्त अनिवार्य काम ढिला गरेकाले मलाई त्यति चित्त बुझेको छैन । पार्टीले वैधानिकता गुमाउनुअघि नै महाधिवेशन हुँदै छ, त्यो हिसाबले […]
‘कसैले छाडेर होइन। म जितेर सभापति बन्छु’, यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको हो। उनले कांग्रेसमा उनको विजयलाई गुटरहित र कम्युनिष्ट बिरुद्ध कांग्रेसको सुदृढताका लागि भएको घोषणा गरेका छन्। आफ्नो लामो अन्तर्वार्तामा डा. कोइराला कतै कुनै पनि ठाउँमा न सुशील कोइराला, न गिरिजा कोइरालाको उच्चारण गरे। बिपीको प्रसंग उच्चारण नहुनुलाई सशांकको कारण लिन […]